Bulshada rayidka ah oo baarlamanka federaalka ugu baaqay in la hagaajiyo anshaxa gollaha shacabka – Radio Daljir
Nofeembar 26, 2013 1:39 b 0
Muqdisho, November 26, 2013 – Urrurada bulshada rayidka ah, culimada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay baarlamanka dowladda federaalka ah inay wax ka bedelaan habka anshaxa xildhibaanada kala duwan ee baarlamanka.
Kulan ay Muqdisho ku yeesheen xubno ka socda urrurada bulshada ee kala duwan iyo gudoomiyaha baarlamanka Soomaaliya Prof. Jawaari ayaa intiisa badan diirada lagu saaray howlaha baarlamanka federaalka oo banaanka yaala.
Prof. Jawaari ayaa sheegay in ay soo dhowaynayaan isla markaasna ay qaadanayaan tallada urruradda bulshada ee wadanka, waxaa uu sheegay in ay mar kasta tix-gelin doonaan fikradaha rayidka oo ay iyagu metelaan.
Urruradu bulshada waxay ku baaqeen baarlamanka in aysan siyaasaddoodu dhan u jan-jeersan, sidoo kale waxay ku baaqeen in awoodda baarlamanka aysan ka dhex muuqan qaybaha war-baahinta kala duwan oo ay haatan xillibaanadu adeegsadaan.
Dhowaan, Muran xoogan ayaa ka dhashay fadhi ay baarlamanka Soomaaliya ku yeesheen Muqdisho, kulankaas ayaa lagu soo bandhigay mooshin ka dhan ah ra?isal wasaaraha dowladda federaalka ah Cabdi Faarax shirdoon saacid, in kastoo dib loo dhigay ilaa 30 bisha.
Fadhigaas ayaa baarlamanku isku khilaafay isla markaasna waxaa ka dhashay buuq iyo ismaan dhaaf u dhexeeyey xildhibaanada kala taageersan ra?isal wasaare Saacid iyo madaxweyne Xasan sheikh Maxamuud.